Heino kune Anopfuura makumi maviri nemashanu emakore eGuillermo Del Toro! - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Heino kune Anopfuura makumi maviri nemashanu emakore eGuillermo Del Toro!
Heino kune Anopfuura makumi maviri nemashanu emakore eGuillermo Del Toro!
yakanyorwa na Shaun Horton October 9, 2017
Kune akawanda mazita anozivikanwa kune vateveri veHorror sevatungamiriri vanoshamisa, vanyori, uye vagadziri: Alfred Hitchcock, Wes Craven, George Romero. Makumi gumi, makumi maviri, makumi matatu emakore kubva ikozvino, vachange vachitaurawo nezvevanhu vakaita saJames Wan, Eli Roth, uyezve, Guillermo Del Toro.
Akazvarwa muna Gumiguru 9th, 1964 kuGuadalajara, Jalisco, Mexico, Del Toro yakatanga kufarira kwekugadzira mafirimu uye yakashanda pairi kubvira ipapo. Chidimbu chake chekutanga chakabuda Cronos muna 1993, yakaburitswa kekutanga muMexico isati yawedzera pasi rese. Iyo inotyisa bhaisikopo, yaive nyeredzi Frederico Luppi naRon Perlman, yakawana inoshamisa makumi maviri nemaviri mibairo.
Bhaisikopo rake rinotevera raive danho rake rekutanga kupinda muHollywood nema1997 Mimic, iyo, nepo isiri flop nenzira ipi neipi, yakanga isiri iyo chero munhu yaangadaidze kuti blockbuster. MimicKugamuchirwa, kwakabatanidzwa nekusafara munzira iyo Hollywood yaimhanyisa nayo zvinhu, yakafuridzira Guillermo Del Toro kudzokera kuMexico ndokuwana yake kambani yekugadzira, iyo yakazoburitsa 2001 Dhiyabhorosi Musana, kumwe kubudirira kwakakosha. Akazodzokera kuHollywood, achitora madhairekitori e Nereza 2, ichipa vateereri vemuAmerica kuravira kwavo kwekutanga kwakasimba kweiyo Del Toro Brand.
Mufananidzo nerubatsiro rwe tasteofcinema.com
Kubva ipapo, Guillermo Del Toro rave zita rekunyepedzera kutyisa, vachigadzira mafirimu akadai se Hellboy uye inotevera, Pan's Labyrinth, uye Pacific Rim. Akanyora zvakare screenplays ye2010's Usatye Rima, Iyo Hobbit trilogy, Crimson Peak, uye kumhanya kwese kwe Dzvinyu paTV.
Parizvino, arikushandira kuparadzira pfungwa yake yakasviba inonakidza kune yakasarudzika nyaya ye Pinocchio, pamwe nenhepfenyuro nyowani yeterevhizheni yakanzi Carnival Row.
Asi mabhaisikopo haasi ese aanga achishanda paari. Pakutanga gore rino akabatana naPatron kugadzira yakasarudzika Tequila zvichibva kumusha kwake.
Mufananidzo wakakomberedzwa nechikafuandwine.com
Saka, simudza girazi kuna Guillermo Del Toro uye mamwe makore mazhinji iye achigovana zvakamonyoroka, surreal zviono nenyika!
Yakaratidzwa mufananidzo nerubatsiro rwe syfy.com
guillermo del toroGuillermo Del Toro mafirimuHellboyHorror DirectorPacific Rimpans labyrinthDhiyabhorosi Musana
Shaun Horton ndiye munyori wenyaya dzeSci-fi / dzinotyisa zvinyorwa zveHana uye Kirasi 5, pamwe neiyo cryptid inotyisa Cenote. Iye anonyora kubva kune yakanaka pacific kuchamhembe kwakadziva kumadokero, akapetana pakati peguta reSeattle nemasango eOlympic National Sango. Akave ari hupenyu-hurefu fan weHorror, kutanga nekuona Gremlins pazera ramakore mana. Makore gare gare, akawana basa raStephen King, achizvichengeta husiku achiverenga iyo tome iyo iri IT. Kubva ipapo, ari kuenderera mberi achiwedzera kufarira kuburikidza nevanyori vakaita saDean Koontz, mafirimu senge Nightmare paElm Street uye Alien, uye yevhidhiyo mutambo nhevedzano ye Dead Space uye Resident Evil.
'Chishanu 13th' Actress Inoratidza Weinstein Kushungurudzwa
31 Nyaya Inotyisa Husiku: Gumiguru 9th "Iyo Raven"